Doorasho boob, xaraash, laaluush iyo awood sheegasho ah | KEYDMEDIA ONLINE
Caburinta musharixiinta u baratameysa kuraasta baarlamaanka, jid-gooyooyinka loo dhigay odayaaha dhaqanka oo ah saxiixayaasha kuraasta iyo guud ahaan boobka doorshada ayuu Cabadiraxmaan ku sifeeyay dhumidda wixii yaraa ee muddada la dhoobayay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa hannaanka doorashooyinka ee uu garwadeynka ka yahay Ra’iisul Wasaaraha Xil-garsiinta ku tilmaamay mid boob, xaraash, laaluush iyo awood sheegasho ku suntan, taas oo keeni karta burburka nidaamka jilicsan ee muddada la soo yabyabayay.
“Waxaa la yiri ergada wax dooranaysa waa inay $30 bixiyaan si loo siiyo shahaado danbi la’aan ah, haddana waa in ay $50 bixiyaan si ay u helaan shahaadada COVID19. Murashaxa kursiga loo xiray, waa in uu isagu qarashka ka bixiyaa ergada, lacagna siiyaa. Sidoo kale guddiga doorashada, waa in ay iyaguna sedkooda helaan”. Ayuu yiri Warsame.
Wuxuu sheegay in hor-kacayaasha hannaanka doorashada ay ku heshiiyeen in horjoogayaasha maamulladu boobaan kuraasta baarlamaanka 11-aad ee JFS, taasoo uu ku macneeyay boob qaawan lagula kacay doorashada.
“Madaxweynaha Dowlad Goboleedka waa in uu isagu kuraasta boobo haddii uu musharrax yahay, ama uu murashax kale u boobaa. Taasi doorasho maaha ee waa boob, xaraash, laaluush iyo awood sheegasho”. Ayuu yiri.
Hoggaamiyaha Wadajir, oo u muuqda inuu sadaal ka bixinayo halka ay ku dhamaan doonto natiijada doorashooyinka boobka ah, ayaa sheegay in jid-gooyooyinka siyaasiyiinta, caburinta beelaha iyo adayaasha dhaqanka sababi doonaan in ay wixii dhisnaa dumaan, ugu danbeyn dhinacyadu meel cidla ah soo istaagaan.
“Ruuxa tartama ee laga guulaysto, xanuun guuldarro oo keli ah ayuu xambaartaa, laakiin haddii tartanka loo diido, ama la xoogo, waa ciishoodaa, ciilkuna wuxuu keenaa aargudasho, waana tan sababaysa colaadda iyo in wixii yaraa ee inoo dhoobdhoobnaa ay dumaan, lana waayo cid u ooyda. Markaa ayey kii waxa boobay, kii la boobay, iyo kii ku fiirsadayba cidla isku warsan doonaan”. Ayuu ku soo gabagabeeyay.
Golaha Midowga Musharixiinta ayaa si weyn kaga soo hor jeeda hannaanka hadda wax ku socdaan, waxayna kulamo is daba joog ah ku leeyihiin Muqdisho, kuwaas oo ay uga arrin sanayaan dhismaha Gole Qaran oo dalka ka qabta doorashooyin loo dhan yahay.